Ianaro ny bokin’i Daniela sy ny Apokalipsy
"Sambatra izay mamaky sy ny mihaino ny tenin'ity faminaniana ity ka mitandrina izay voasoratra ato anatiny; fa antomotra ny andro." - Apok. 1:3.
Tokony hotorina ny hafatra izay hamoha ny fiangonana. Tokony hatao ny ezaka rehetra mba hanomezana hazavana, tsy amin'ny vahoakantsika ihany fa amin'izao tontolo izao koa. Nolazaina tamiko fa ny faminaniana ao amin'ny Daniela sy ny Apôkalipsy dia tokony hatonta pirinty amin'ny boky kely, miaraka amin'ireo fanazavana ilaina, ary tokony halefa na aiza na aiza eto an-tany. Ny vahoakantsika dia tokony hanana ny hazavana bebe kokoa manoloana azy ireo. - TMGW, 117.
Ireo izay mihinana ny nofo sy misotro ny ran'ny Zanak'Andriamanitra dia hitondra fahamarinana avy ao amin'ny bokin'i Daniela sy Apôkalipsy izay azo avy tamin'ny Fanahy Masina. Hanomboka hiasa amin-kery tsy hay tohaina izy ireo. Avy eo am-bavan'ny ankizy no handrenesana ireo zava-miafina izay nafenina tamin'ny sain'ny olona. (...)
Maro amin'ireo faminaniana no eo an-dalam-pahatanterahana haingana (...) Hiverina indray ny tantara tany aloha; ho velona indray ireo fifanoherana fahiny ary handrombaka ny vahoakan'Andriamanitra na aiza na aiza ny loza. Efa miha-mahazo laka eo ny fianakavian'olombelona ary hatraiza hatraiza eto an-tany ny herisetra. (...)
Diniho miaraka amin'ny bokin'i Daniela ny bokin'ny Apôkalipsy satria miverina ny tantara. (...) Isika, miaraka amin'ireo tombon-tsoa ara-pivavahana ananantsika dia tokony hahalala be lavitra noho izay fantatsika ankehitriny.
Ny anjely dia maniry ny handinika ireo fahamarinana izay naseho ny olona mandalina ny Tenin'Andriamanitra amin'ny fo torotoro sy mivavaka mba hanana fahalalana lehibe sy lalina kokoa izay ny Tompo irery ihany no afaka hanome azy.
Raha manakaiky ny faran'ny tantaran'ity tany ity isika dia ilaina ny handinihintsika manokana ny faminaniana mifandraika amin'ny andro farany. Ny boky farany ao amin'ny Testamenta Vaovao ao amin'ny Soratra Masina dia feno fahamarinana izay ilaintsika ny mahatakatra azy. Saina maro no nohajambain'i Satana mba haneken'izy ireo amim-pifaliana ny fialan-tsiny rehetra tsy handinihina ny bokin'ny Apokalipsy. Saingy I Kristy kosa, amin'ny alalan'i Jaona mpanompony, dia manambara eto ankehitriny izay hitranga amin'ny andro farany; ary izao no nolazainy, «Sambatra izay mamaky sy ny mihaino ny tenin'ity faminaniana ity ka mitandrina izay voasoratra ato anatiny». - TMGW, 116, 117